Ny tanjon'ny fitaovana mandeha ho azy sy ny ezaka amin'ny varotra | Martech Zone
Ny tanjon'ny fitaovana mandeha ho azy sy ny ezaka amin'ny marketing
Zoma, Aprily 22, 2016 Zoma, Aprily 22, 2016 Douglas Karr
Misy fironana vitsivitsy ao amin'ny indostrian'ny marketing nomerika izay tsikaritray izay efa misy fiatraikany amin'ny tetibola sy loharanom-bola - ary hitohy amin'ny ho avy.
Raha jerena ny fomba fampiasam-bola, hitombo kely ny teti-bolan'ny marketing amin'ny taona 2016, eo amin'ny 1.5% eo amin'ny vola miditra amin'ny serivisy. Ny fiakarana dia hahatratra ny fitomboan'ny fidiram-bolan'ny serivisy, na izany aza, manome tsindry bebe kokoa amin'ny mpivarotra hanitatra ny habaka sy ny fahombiazana miaraka amin'ny loharanom-pahalalana kely fotsiny. Source: ITSMA
Raha fintinina, ny teti-bola ho an'ny marketing nomerika dia mitombo ary ny mpivarotra C-level dia antenaina ho mora tanana ary hahatakatra tsara ny fahasarotan'ny tontolo iainana, ny fitaovana misy, ary ny tatitra ilaina hanatsarana ny ezaky ny orinasa iray hitazona azy ireo. Noho ny fipoahan'ny fantsona sy ny filana manatsara ny maro dia maro ny zavatra ataontsika noho ny kely kokoa… ary mihasarotra izany.
raha mitombo ny mpiasa marketing, ny fanantenana ho an'ny mpivarotra hanao bebe kokoa amin'ny kely kokoa dia mitohy. Ary ny ankamaroan'ny fanerena dia ny hampiasa vola amin'ny fitaovana marketing izay manampy amin'ny fanalefahana ny ora maha-olona ilaina hamaly, handrafetana, hanatanterahana ary handrefesana ireo ezaka ara-barotra.
Ny loharanom-pahalalana maha-olona sy fanovozana saina ho an'ny olombelona, ​​tsy soloin'izy ireo izany
Ny masoivohontsika dia manao asa kely ho an'ny orinasa lehibe be. Amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro, dia mety manana loharano natokana 18 na mahery miasa amin'ny asan'ny mpanjifa isika. Manomboka amin'ny manam-pahaizana momba ny marika, na amin'ny mpitantana tetikasa, na amin'ny mpamolavola, na amin'ny mpamorona, na amin'ny mpanoratra an-tsoratra… mitohy hatrany ny lisitra. Ny ankamaroan'ity asa ity dia tontosa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana hafa. Mampivelatra ny paikady izahay ary manatanteraka ny paikady izy ireo.
Ny fitaovana dia fomba iray ahafahantsika mampitombo ny touchpoint miaraka amin'ny mpanjifa sy ny vinavinany. Mampiasa fanangonana dashboard, tatitra, famoahana sosialy ary fitaovana fitantanana tetikasa izahay. Ny tanjon'ireny fitaovana ireny dia tsy ny automatisation ny asantsika, na izany aza. Ny tanjon'ireny fitaovana ireny dia ny hampitombo ny fotoana laninay manokana amin'ny mpanjifa tsirairay mba hanazavana sy hanatsarana ny paikady apetrakay.
Rehefa mitady hampiasa teti-bola hampiasana automatique asa anatiny ianao dia azoko antoka fa tsy ny hanolo olona no tanjonao fa ny hanafaka azy ireo hanao izay tsara indrindra vitany. Raha te-hanimba ny famokarana ataon'ny ekipa mpivarotra anao ianao - ataovy izay tsy hametahana azy ireo amin'ny takelaka sy mailaka. Raha te hampitombo ny vokatra ianao dia ataovy ho lohalaharana ny fividianana fitaovana hahafahan'ny ekipanao manana izay ilaina rehetra hahomby.
Farany, ny tanjon'ny rafitra mifandraika amin'ny marketing dia tokony ho manome fotoana mamokatra bebe kokoa miaraka amin'ireo vinavinanao sy mpanjifanao fa tsy latsa-danja. Miteraha bebe kokoa ho an'ny mpanjifanao dia hahazo vokatra ianao. Ohatra vitsivitsy:
Mampiasa izahay Wordsmith ho an'ny Marketing hanivanana sy hanolotra ny angona Google Analytics amin'ny fomba azon'ny mpanjifanay atao tsara. Izany dia ahafahantsika mampita ny fironana sy manolotra ny paikady hanatsara fa tsy handany fotoana ezahanao hanazavana Analytics tahirin-kevitra.
Mampiasa izahay gShift mba hanaraha-maso ny fiantraikan'ny media sosialy sy ny fikarohana eo amin'ny lafiny farany. mari-pankasitrahana sarotra, raha tsy azo atao, tsy misy fitaovana toa ny gShift. Raha tsy mandrefy ny valin'ny tetikadin'ny votoatinao ianao, dia ho sarotra aminao ny manazava ny antony tokony hanohizan'ny mpanjifanao vola.
Mampiasa izahayHootsuite, buffer, ary Jetpack hitantana ny ezaka fanontana ara-tsosialy anay. Na dia ekipa kely aza izahay, dia mitabataba tanteraka amin'ny Internet. Amin'ny fandaniako fotoana kely kokoa amin'ny famoahana dia afaka mandany fotoana bebe kokoa hifaneraserana amin'ireo mpijery media sosialy aho.
Ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo dia ahafahantsika mampifantoka ny ezaka ataontsika amin'ny toerana tokony hisy azy ireo fa tsy miasa amin'ny asa an-tany izay tsy omen'ny mpanjifanay lanja velively. Tian'izy ireo ny valiny - ary mila manamboatra azy ireo isika!
Tags: Analyticstanjon'ny mandeha ho azyfitaovana automation-barotraautomation marketingtatitra
Apr 27, 2016 amin'ny 9: 28 AM
Manana andro tsara!
Apr 27, 2016 ao amin'ny 12: PM PM